Find here Mahashivratri Vrat Katha in Nepali language. We have posted here Nepali vrat katha story about Maha Shivratri in Nepali language. We are here with to information, facts about Lord God shiva in Nepali language. Get here hindu religion tips in Nepali language. Get Maha Shivratri Story in Nepali language. Happy Shivratri 2017. Happy Maha Shivratri 2073
Mahashivratri Vrat Katha in Nepali Language
पढनुहोस् महाशिवरात्रिको पवित्र, प्राचीन र प्रामणिक कथा
महाशिवरात्रि पर्वको व्रत-कथा Mahashivratri Vrat Katha in Nepali
पर्ूव कालमा चित्रभानु Chitravanu नामक एक शिकारी (hunter) थियो । जनावरहरु को हत्या गरेर ऊ आफनो परिवार लाई पाल्दथ्यो । ऊ एक साहूकार को ऋणी थियो, तर उसले ऋण समयमा तिर्न सकेन ।
क्रोधित साहूकारले शिकारीलाई शिवमठमा बंदी बनाइ हाले । संयोगले त्यस दिन शिवरात्रि (Shivratri) थियो । शिकारी ध्यानमग्न भएर शिव संबंधी धार्मिक religious कुराहरु सुनिरहे । चतर्ुदशीको दिन उनले शिवरात्रि व्रत को कथा पनि सुन्यो ।
Evening हुनासाथ साहूकारलेे उनलाई आफूकहाँ बोलायो र ऋण (loan) तिर्ने विषयमा कुरा गरयो । शिकारी अर्कोदिन सारा ऋण (debt) फर्काइदिने वचन दिएर बंधनबाट छुटयो। आफनो दिनचर्या सँगै ऊ जंगल jungle मा शिकार को लागि निस्कियो । तर दिनभर बंदी गृहमा रहनाको कारण भोक-प्यास ले व्याकुल थियो । शिकार खोज्दै ऊ बहुत टाढा निस्कि सक्यो ।
जब अंधकार भयो तब उनले विचार गरेकि रात जंगल (jungle) मा नै बिताउनु पर्छ। ऊ वनको एक तालको छेउएक बेल को रुखमा चढेर रात गुज्रिने पर्खाइ गर्न लागे. बिल्व वृक्ष को तल शिवलिंग थियो जो बिल्वपत्रहरुले ढाकिएको थियो । शिकारी लाई त्यसको ठेगान थिएन । बास बनाउदको समय उनले जो पातहरु तोडे, त्यो संयोग ले शिवलिंगमा झर्दै गयो। यस प्रकार दिनभर भोकै-प्यासै शिकारी को व्रत पनि भयो र शिवलिंगमा बिल्वपत्र पनि चढदै गयो। एक प्रहर रात्रि बित्नुमा एक गर्भिणी हिरणी female deer ताल lake मा पानी पिउन पुग्यो ।
शिकारीले धनुषमा तीर चढाएर जसरी नै तीर तान्यो, हिरणी बोली, ‘मं गर्भिणी छु । शीघ्र नै प्रसव गर्नेछु । तिमी एक साथ दर्ुइ जिवहरुको हत्या गर्र्छौ, जुन ठीक छैन । म बच्चाहरुको जन्म दिएर शीघ्र नै त्रि्रो समक्ष प्रस्तुत भइहाल्नेछु, तब मार्नु। ‘
शिकारी ले तीरलाई समेटयो र हिरणी जंगली झाडीहरुमा लुप्त भइसकिन् । तीर चढाउने तथा समेटने समय कुछ बेल पत्र अनायास नै झरेर शिवलिंग shiva linga मा झरयो। यस प्रकार उसको अनजानमा नै प्रथम प्रहर को पूजन पनि सम्पन्न भयो ।
Tags: Mahashivratri Vrat KathaMahashivratri Vrat Katha in NepaliMahashivratri Vrat Story in NepaliShivratri Vrat Katha in Nepali